Njikọ ọhụrụ n'etiti Ogo spam na ojiji ekwentị
Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Njikọ ọhụrụ n'etiti Ogo spam na ojiji ekwentị
Ekwentị ekwe ntị dị ebe niile n'oge a, ebe ndị ọkachamara na-arụrịta ụka elele na ọghọm nke ngwaọrụ a. Mana ekwentị nwere ike na-emetụta ọmụmụ nwoke? Ndị ọkà mmụta sayensị si Pusan ​​National University, Korea, nyochara nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya banyere njikọ dị n'etiti itinye uche na spam, ịdị ndụ, na motility na iji ekwentị eme ihe. Nsonaazụ ha, na-agbanwe agbanwe na data in vivo na in vitro, na-eje ozi dị ka ịdọ aka ná ntị nye ndị ọrụ ekwentị nwoke chọrọ ichekwa ogo spam ha.
Igwe ekwe ntị enwewo ihe ịga nke ọma n'ime ka ụwa bịaruo nso, na-eme ka ndụ dịrị ndụ n'oge ihe siri ike. Ma ekwe ntị nwekwara ihe ọjọọ ha. Ha nwere ike inwe mmetụta ọjọọ na ahụ ike. Nke a bụ n'ihi na ekwentị mkpanaaka na-ekupụta rediofrequency electromagnetic waves (RF-EMWs), nke ahụ na-abanye n'ime ya. Dịka nyocha meta-analysis sitere na 2011, data sitere na ọmụmụ ndị gara aga na-egosi na RF-EMW nke ekwe ntị na-ewepụta na-eweda ogo sperm site n'ibelata ike ha, ike na-arụ ọrụ, na itinye uche ha. Agbanyeghị, meta-analysis nwere oke ole na ole, n'ihi na ọ nwere obere data na vivo ma were ụdị ekwentị dị ugbu a emechiela.
N'ịgbalị iweta nsonaazụ ọhụrụ na tebụl, otu ndị nyocha nke onye enyemaka Prọfesọ Yun Hak Kim sitere na Pusan ​​National University, Korea duziri meta-nyocha ọhụrụ gbasara mmetụta ekwentị nwere na ogo spam. . Ha nyochara ihe ọmụmụ 435 na ndekọ ndị e bipụtara n'etiti 2012 na 2021 wee chọpụta 18 - na-ekpuchi ngụkọta nke ihe atụ 4280 - dabara adaba maka nyocha ndekọ ọnụ ọgụgụ. Emepụtara akwụkwọ ha n'ịntanetị na Julaị 30, 2021 wee bipụta ya na Mpịakọta 202 nke nyocha gburugburu ebe obibi na Nọvemba, 2021.
N'ozuzu, nsonaazụ ya na-egosi na eji ekwentị eji ekwentị eme ihe n'ezie na mbelata sperm motility, viability, na itinye uche. Nchọpụta ndị a nụchara nke ọma karịa nke sitere na meta-analysis gara aga ekele maka nyocha nke obere otu dị mma nke data ahụ. Akụkụ ọzọ dị mkpa nke ndị nyocha ahụ lere anya bụ ma ọ bụrụ na oge mgbasa ozi dị elu na ekwentị na-ejikọta ya na àgwà sperm dị ala. Otú ọ dị, ha chọpụtara na mbelata nke àgwà sperm enweghị ihe jikọrọ ya na oge ikpughe - naanị na ikpughe na ekwentị mkpanaaka n'onwe ya. N'ịtụle nsonaazụ ya na-agbanwe agbanwe na data in vivo na in vitro (ọdịdị sperm), Dr. Kim na-adọ aka na ntị na "ndị nwoke na-eji ekwentị mkpanaaka kwesịrị ịgbalịsi ike ibelata ojiji ekwentị iji chebe àgwà spam ha."
N'ịmara na ọnụ ọgụgụ ndị na-eji ekwentị eme ihe ga-abawanye n'ọdịnihu, oge eruola ka anyị malite ịtụle ikpughe na RF-EMW dịka otu n'ime ihe ndị na-akpata mbelata ogo spam n'etiti ndị nwoke. Ọzọkwa, n'ịhụ ka teknụzụ si apụta ngwa ngwa, Dr. Kim na-ekwu na "a ga-achọkwu ọmụmụ ihe iji chọpụta mmetụta ikpughe na EMW ndị a na-ewepụta site na ụdị ekwentị ọhụrụ na gburugburu dijitalụ ugbu a." Isi okwu bụ, ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị maka ọmụmụ gị (yana nwere ike ịbụ akụkụ ndị ọzọ nke ahụike gị), ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche machichi ojiji ekwentị gị kwa ụbọchị.
Daalụ ọrịa na-efe efe maka obiọma, mmụọ obodo na njikọ miri emi nke mmadụ
Nchọpụta ọrịa kansa mbụ site na iji ngwa ntanetị ọhụrụ